Mkpa nke ikuku ventilashion ulo gi nke oma | Bezzia
Mkpa nke ikuku ventilashị n'ụlọ nke ọma
Pau Heidemeyer | 01/05/2021 16:00 | Emelitere ka 28/04/2021 16:47 | Home
Nwere ezigbo ikuku n'ụlọ bụ isi ihe iji bụrụ ezigbo ahụike. You na-achọkarị iku ume? Ọ dị mkpa ka ị na-eme ya oge niile, iji belata ihe ndị na-emetọ ihe.
Enweghi ikuku zuru oke n'ụlọ nwere ike ịmepụta mmụba nke nje, mmụba dị ukwuu na ihe ndị na-emerụ ahụ ike, dị ka akuku mmiri, nje bacteria na-ekwe omume site na ntutu ụmụ anụmanụ, carbon monoxide, ma ọ bụ carbon dioxide.
Ọ bụrụ na ụlọ anaghị arụ ọrụ nke ọma, nke a nwere ike imetụta ahụike mmadụ. N’etiti mgbaàmà ndị ọzọ, isi ọwụwa, nsogbu iku ume ma ọ bụ nsogbu ihi ụra na-abawanye, ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke nsonaazụ nke ịpụtaghị ụlọ.
N’ụlọ nwere ezigbo ikuku, O nwechaghi ihe mgbagwoju anya ichikota iru mmiri nke ulo, mkpochapu ahihia, uzuzu, A ga-ewepụkwa ísì ọjọọ na ekele maka ikuku oxygen a, ị ga-enwe ike ịbawanye mgbasa ikuku.
1 N’ụzọ dị otu a, ị ga-ama ma ikuku ikuku dị n’ụlọ gị nke ọma
2 Ihe ndị a bụ uru dị n’ịnọgide na-enwe ezigbo ikuku n’ụlọ
3 Ihe ndị a bụ nsonazụ adịghị mma ikuku na ụlọ
4 Nke a bụ otu ị ga - esi nweta ikuku dị mma n'ụlọ
5 Esi ventilata ụlọ
5.1 Eke ikuku
5.2 Igwe ikuku gafere
5.3 Arụrụ ventilashị
5.4 Jiri fans
5.5 Oke nke ndị nọ n'ime ụlọ
N’ụzọ dị otu a, ị ga-ama ma ikuku ikuku dị n’ụlọ gị nke ọma
Ọ dị mkpa imezu omume nke ikuku n'ụlọ kwa ụbọchị, mgbe ụfọdụ anyị kwenyere na anyị na-eme ihe niile iji nweta ụlọ ahụike, agbanyeghị, anyị nwere ike ọ gaghị eme ya dịka anyị chere. Iji mara ma ọ bụrụ na ụlọ gị emeela ka ikuku dị mma, ọ ga-ezu iji soro usoro nduzi.
Probablylọ gị nwere ike enweghi ikuku ikuku zuru oke, n'ihi na oge ụfọdụ anyị na-echefu iji wepụ ihe esi nri na kichin ma ọ bụ n'ọnọdụ ndị ọzọ anyị enweghị onye na-ewepụta ihe na ime ụlọ ịsa ahụ iji nyere anyị aka ịfefe ụlọ ahụ. Ọ bụrụ n’inweghị onye na-emefu ikuku nke ga-eme ka ikuku dị ọcha, ịkwesịrị imepe windo ugboro abụọ n’ụbọchị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị kpebie ị smokeụ sịga n'ime ụlọ, ọ nwere ike ime ka nchịkọta nke ihe ndị na-egbu egbu, nke na-eme ka ahụike nke ndị bi na ya ka njọ.
Ihe ndị a bụ uru dị n’ịnọgide na-enwe ezigbo ikuku n’ụlọ
A ga-eme ka ụlọ ahụ nwee ikuku nke ọma nke mere na ikuku ikuku kachasị mma. Maka nke a, ọ kachasị mma ịfụfụ ụtụtụ na kwa ụbọchị. Ihe bụ ihe ọzọ, gbalịa na enwere ụlọ gị ugbu aỌ bụrụ na ịnwere ohere, mepụta drafts site na imeghe windo na ụzọ abụọ.
Naanị site na ikuku 10 nkeji kwa ụbọchị, ị ga-eme ka ụlọ gị nwee ọtụtụ uru, dị ka ndị a kọwara n'okpuru.
Mbelata nke ihe nfụkasị ahụ.
La ikuku oxygenation ikuku na carbon dioxide mwepụ.
iwu nke iru mmiri.
Ga-ewepụ na na-esi ísì ọjọọ na ikuku ikuku.
You ga-enweta zuru ike nke ọma ebe ọ bụ na ụlọ ahụ ga-adị ọtụtụ karịa ikuku ma dị ọcha.
Ihe ndị a bụ nsonazụ adịghị mma ikuku na ụlọ
N’ụlọ, a ghaghị ịkpachapụ ikuku ikuku mgbe niile iji zere na ikuku anaghị eku ume nakwa na ọ na-anọgide n’ime ya. Nkasi obi na ndu nke ndi ibi na-adabere n’inwe ikuku ohuru ma dịkwa ọhụrụ kwa ụbọchị.
Uzuoku a na-emepụta mgbe ị na-esi nri, mgbe ị na-asa ahụ, ọ bụrụ na anyị ejiri kpo oku tinyere ventilashị na-adịghị mma, nwere ike ibute ntakịrị ikuku oxygen, mana ọ naghị eweta mmebi ahụ ike.
Ngụgụ obi a maka ndị bi n'ụlọ, ga-adịgide maka nke a, a ghaghị ime ventilashị mgbe niile na kwa ụbọchị site n'oge ruo n'oge. Enweghị ụlọ nwere ezigbo ikuku, ọ metụtara nrụgide na ụfọdụ ọnọdụ iku ume.
Nke a bụ otu ị ga - esi nweta ikuku dị mma n'ụlọ
Anyị kwesịrị ịkọwa ọdịiche dị mkpa, ebe ọ bụ na n'oge oyi, a ga-eji usoro kpo oku mee ihe mgbe niile ma ha na-ehichapụ gburugburu ebe obibi nke ukwuu.
Enwere ike kwụọ ụgwọ nke a site na iji ụfọdụ iru mmiri. ma na-arịọ maka usoro nke ikuku ikuku ventilation, nke anyị kwurula na mbụ.
Maka ụlọ iji rụọ ọrụ na ventilashị zuru oke n'oge ọnwa ọkọchị, ihe a na-atụ aro ka ijikwa ngwa eletriki, ị na-ezere ọkụ ndị na-eme ka oké okpomọkụ, tinye akụrụngwa osisi siri ike ma tinye osisi nke na-ahapụ ikewapụ okpomọkụ.
Esi ventilata ụlọ
Ọzọ anyị ga-enye gị igodo ụfọdụ ka i wee nwee ike ibute ụlọ gị na usoro atọ dị iche iche ị nwere ike itinye n'ọrụ taa.
Ọ dị mkpa imeohuru ikuku site na imeghe windo ka zere odide nke ikuku n'ụlọ. A na-eme ya naanị site na imeghe windo.
Tinye ụlọ ndị ọzọ ikuku ọ dị mkpa iji wepu mmiri mmiri emepụta n'abalị site na iku ume, ị nwere ike ikuku ma ọ dịkarịa ala minit 30.
Igwe ikuku gafere
Nke a bụ omume kachasị mma maka ụlọ ikuku, ihe ị kwesịrị ime bụ imepe windo abụọ n’akụkụ abụọ na-abụghị nke ụlọ ka ikuku ikuku dị n'ime ya na-eme ka ọ dị ọhụrụ oxygen ngwa ngwa na nke ọma.
Ụdị nke a ikuku dị iche n'ihi na:
A na-eme ya ekele n'ibu ọcha.
Nwere ike ịme nsị anwụrụ ọkụ nke mere na ikuku na-ekpo ọkụ na-arịgo na ikuku oyi na-agbada.
Jiri windo airtightNdị a kwesịrị ikwe ka ntakịrị ikuku mgbanwe iji hụ na ahụike na ogo nke ikuku dị n'ime ụlọ.
Wayzọ ọzọ ị ga-esi gbaa ụlọ gị ume bụ site na ndị fan, nke na-enyere anyị aka kesaa ikuku n'ụzọ ka mma. Iji mezuo ezigbo ikuku, ị nwere ike ime usoro ndị a:
Debe onye na-akwado ya nso na windo mepere emepe dị ka o kwere mee, na-atụ aka na windo ahụ. Nke a na-eme ka ihe ndị dị n'ime ụlọ nwee ike iwepụ n'ụzọ dị irè.
Etinyekwala ndị Fans aka n’ebe ndị ọzọ nọ, n’ihi na nke ahụ nwere ike ime ka ikuku rụrụ arụ gaba na ha ogologo.
N'ikpeazụ, anyị na-akwado jiri n'uko Fans nke ahụ ga - enyere gị aka ịkwalite mgbasa ikuku na ụlọ, n'agbanyeghị ma windo mepere ma ọ bụ.
Oke nke ndị nọ n'ime ụlọ
Anotherzọ ọzọ ị ga-esi gbapuo ụlọ gị, ma ọ bụ iji hụ na ọ naghị ewebata ihe ndị ahụ na-adịghị mma na nje, bụ ịmachi ọnụ ọgụgụ ndị nọ n'otu oghere na oge ụfọdụ n'ụlọ gị. Yabụ, anyị na-akwado ka ị gbasoo ntuziaka ndị a:
Delata ọnụ ọgụgụ ndị na-abịa n'ụlọ gị.
Na-ezukọ na ebe kachasị ukwuu na nke sara mbara, yabụ ị nwere ike ịnọ ogologo oge dị ka o kwere mee.
Gbaa mbọ hụ na nleta ndị ahụ dị mkpirikpi.
I gachaa nleta, echefula iku ikuku.
Ihe a niile ga - enyere ikuku nke ụlọ gị aka ịnọgidesi ike na karịa ihe niile. Echefula ikuku ikuku gị n'ụlọ n'ụtụtụ ọ dịkarịa ala ọkara awa ka ị nwee ike iku ume ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Mkpa nke ikuku ventilashị n'ụlọ nke ọma
Nkwadebe siri ike maka ịgba egwu tennis
Echiche iji jigharị ite iko